Iikhosi zeQGIS ezigqwesileyo ngeSpanish-Geofumadas
NgoJanuwari, 2018 Ukufundisa i-CAD / GIS, qgis
Ukuthatha ikhosi ye-QGIS ngokuqinisekileyo kukwinjongo yabaninzi kulo nyaka. Kwiinkqubo zemithombo evulekileyo, i-QGIS iye yaba sisisombululo kwezona mfuno zinkulu, zombini ziinkampani zabucala kunye nemibutho karhulumente.
Ngoko ke, nokuba uqonda i-ArcGIS okanye esinye isixhobo, kubandakanywa kwakhona kwi-QGIS yakho iphinda ibe yimbopheleleko.
Le yingqokelela yeendlela zeSpanish zeQGIS onokukhetha kuzo. Ndiye ndabayalela ngexabiso, ukusuka kwelona zantsi ukuya kwelona liphezulu. Nangona ndibeke idatha eyongezwe ngexabiso, njengenani leeyure kunye nomhla oqikelelweyo wezifundo eziqala kwi-2018.
Hayi igama Iiyure yokuqalisa Ixabiso UMboneleli
1 Funda i-QGIS Basic Geographic Information System (GIS) free free 50 $ Holger Bermeo - Udemy
2 IQGIS Intle Course Iiveki ze8 free 60 $ Gidahatari
3 I-QGIS eSebenzayo ukusuka ekuqaleni kunye noLwazi olukude kwizoLimo free free 70 $ Pedro Barrera Puga - Udemy
4 Funda iQGIS ukususela ekuqaleni. I-code ye-free ye-GIS free free 75 $ GeoCastAway - Udemy
5 Kwi-Course SIG Iiyure ze30 free 80 € IniSIG
6 I-Course kwiNkqubo yeeNdawo zeNgcaciso ngeQGIS Iinyanga ze3 3-ene-2018 137 $ Ikholeji yeGeographers yasePeru - ICIP
7 Inkqubo ye-Intanethi QGIS 2.18 Las Palmas Iiyure ze60 11-ene-2018 200 € Imephu yeGIS
8 Inkqubo ye-Intanethi ye-QGIS kunye nenqanaba lomsebenzisi wengca Iiyure ze80 22-ene-2018 240 € I-CursosGIS - iTYC GIS
9 Nqanaba leQGIS lokuqalisa Iiyure ze90 15-feb-2018 248 € Imasgal
10 Inkqubo ye-QGIS - Iinkqubo zoLwazi lweNdawo Iiveki ze4 5-ene-2018 300 $ MasterSIG
11 Inkqubo ye-QGIS: Isingeniso kwiNkqubo zoLwazi lweeNdawo Iiyure ze60 30-ene-2018 250 € GeoInnova
12 QGIS - SineTalente Iiyure ze100 a chaziwe 250 € Uqeqesho lweGeospatial EN
13 Inkqubo ye-Geographic Information System (GIS) Iiyure ze32 a chaziwe 470 $ GIS Mexico
Njengoko ubona, kukho iindlela ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, usenokuzibuza:
Yaye ndiyiphi ikhondo eliya kundithatha?
1. Iikhosi zasimahla. Ukuba ungxamele ukufunda, iikhosi zasimahla zezona zikhetho zilungileyo, kuba azifuni ukuba uye kwisigqi seqela lonke labalingane. Ngale ndlela, iikhosi ze-Udemy zezona zilungileyo, ungaqala nangaliphi na ixesha kwaye unokufikelela kuzo ukuze uzibone ngonaphakade, ngokungafaniyo nezinye onokufikelela kuzo ixesha lokuqhubeka kwekhosi.
Kuba zizifundo zasimahla, zihlala zitshiphu. Kwakhona, ngezaphulelo zonyaka ungazifumana ukuya kuthi ga ngaphantsi kwe- $ 15.
2. Izifundo zamaqela. Ukuba awungxami kwaye ufuna ukuthatha ikhosi ngexesha elimiselweyo, ezinye iindlela ziphakathi kwama-200 ukuya kuma-250. abafundi eklasini.
Inzuzo yolu hlobo lwenkcazo kukuba badibene nenkqubo ye-Master, ngoko unokuthatha ezinye izifundo eziphambili kunye ne-bonus media media.
3. Iikhosi zobuso ngobuso. Esi sibonelelo siyancipha ngokuncipha, sisasetyenziswa ziiyunivesithi zabafundi bekhampasi; ngezithintelo zeendleko eziphezulu kunye neziphumo ezinxulumene noko zeshedyuli, ukugcwala kwabantu, kunye nokuhamba ukuya kwigumbi lokufundela. Njengomzekelo sibeka i-GIS Mexico, edlula i-470 yeedola ngeeyure ezingama-32. Ngelixa ikhosi ilungile kakhulu, inikwe umda kwingingqi ethile.
Kubalulekile ukuba kwikhosi nganye oyifumanayo ufuna ubungqina. Oku kunokuba yidiploma elula evela kwinkampani yomthengisi, onokuthi uyixhase i-resume yakho, njengoko behlala beyifuna xa uyibonisa kwi-resume yakho. Ukuba basakunika ukuqinisekiswa okubalwa njengamanqaku okugqibezela idiploma okanye isidanga senkosi, kungcono kakhulu.
Ukuba uyazi ezinye izifundo ze-QGIS ngesiSpanish eziphuhlisiwe ngezikhathi ezithile, unganqikazi ukusixelela.
I-Bestseller Uhlalutyo lwengxelo yolwazi lwangaphakathi: I-GIS yokuqalisa kunye ne-R ne-QGISYiba neNgqiqo kwi-Spatial Data Analysis Ukusebenzisa i-R & QGIS Ngokusebenza Kwiprojekthi Yinyani - Fumana i-Job kwi-Data Spatial Data!€ 199.99€ 129.99 4.3
I-Bestseller Isingeniso kwiNgcaciso yolwazi lweZithuba kunye ne-PostGIS ne-QGIS 3Funda i-SQL yeSpatial kunye nolawulo lweenkcukacha kwi-GIS Professionals€ 99.99€ 64.99 4.5
I-QGIS yaBaqalayo # 1: QGIS 3 Ukuziqhelanisa. + I-eBook eyi-111 yasimahlaQGIS isifundo: Jonga ujongano. Yenza iMephu yeMixholo enomthunzi. Funda iziseko ze-GIS, uhlalutyo lwejogosisi kunye nejografi€ 39.99€ 24.99 4.5
I-QGIS 3.10 LTR yabaNgcali be-GISFunda indlela yokuphakamisa amandla e-QGIS ukuphucula isicwangciso sakho semibutho yendawo€ 99.99€ 64.99 4.3
Ukwaziswa kwe-GIS kunye ne-QGIS 3Funda iziseko ze-GIS kwaye ukhululeke ekujonganeni ne-QGIS.€ 19.99€ 12.99 4.3
Isingeniso kwi-GIS: Uhlalutyo loLwazi lweSithuba kunye neQGISFunda i-GIS, uhlalutyo lwendawo, imephu yewebhu kunye nokuzalisa izandla kwiiprojekthi ze-GIS ngeQGIS€ 149.99€ 94.99 4.2
I-GIS kwi-QGIS 3 yabaqalayoFunda i-QGIS 3 ukusuka ekuqaleni ngokusombulula iprojekthi yobomi benene kwaye ufumane ibhonasi ye-e-book guide€ 99.99€ 64.99 4.5
Qgis 101Ukusuka ekuqaleni ukuya kwingxaki yokusombulula ingxaki€ 199.99€ 129.99 4.2
Inqanaba loku-1 le-GIS kunye ne-QGIS: Isiseko se-QGIS somsebenzi we-Smart GISNgaba uyafuna ukudlala ngeGIS kwicandelo leQGIS?! Emva koko Bhalisa kule Khosi ukuze uqalise ukudlala kunye nokonwabela i-QGIS!€ 199.99€ 129.99 4.3
I-QGIS kunye ne-Google Earth Injini yeZicelo zeNdaloUkuqhuba uhlalutyo olusetyenzisiweyo lomhlaba (UkuBona okukude kunye neGIS) kwezicelo zeNdalo kwiQGIS nakwiGoogle Injini yeNjini€ 109.99€ 69.99 4.5
[Uphakathi] Uhlalutyo lweenkcukacha ze-Spatial ngeR, QGIS & NinziYiba ngumthombo ovulekileyo iGIS Guru kunye neTackle Spatial Data Analysis Ukusebenzisa i-R, i-QGIS, i-GRASS ne-GOOGLE EARTH€ 199.99€ 129.99 4.5
Ukuzenzekelayo kwe-QGIS 3.xx kunye nePythonUkuthatha izakhono zakho ze-QGIS kwinqanaba elilandelayo€ 99.99€ 64.99 4.5
I-QGIS 3: ukusuka kwi-Beginner ukuya kwi-AdvancedFunda izakhono eziza kukwenza ugqame kukhuphiswano€ 99.99€ 64.99 4.7
Qalisa nge-GIS kunye nokuBona okuKude kwi-QGIS #AbasaqalaFumana isishwankathelo kwaye ufunde iziseko ze-GIS, QGIS kunye ne-Remote Sensing ngedatha evulekileyo kunye nezixhobo (i-QGIS kunye ne-Google Earth Injini)€ 19.99€ 12.99 4.1
I-QGIS yabaQala # 4: Funda i-Geocoding QGIS 3.FREE 86p eBookIsifundo seQGIS: Idilesi yedilesi yespredishithi yedatha kwimephu zikaGoogle, imigca yesitalato kunye neendawo zedilesi. IJografi, Q GIS€ 39.99€ 24.99 4.1
Funda iinkqubo zeenkcukacha ze-geographic (GIS) kunye ne-QGISsifunde indlela yokusebenzisa isofthiwe yomthombo we-GIS ovulekile ukulawula ulwazi lwendawo€ 39.99€ 24.99 3.7
I-Bestseller I-QGIS esebenzayo yohlalutyo lweDatha: Ukuqalisa kwabaGcisaIinkqubo zoLwazi lweJografi zeeNgcali (i-GIS) zohlalutyo lweDatha ye-Spatial nge-QGIS: Yiya kwinqanaba elisisiseko ukuya kubuGcisa€ 149.99€ 94.99 4.5
Isiseko se-GIS kunye neWebhu ye-GIS: I-QGIS, i-ArcGIS Pro kunye ne-Intanethi, iGeoServerNgaba uyafuna ukuqala i-GIS kunye neWebhu yeGIS ukuSebenza ngesikhokelo esifanelekileyo kunye nolwazi oluSiseko kuzo zombini ezi zinto, emva koko i-ENROLL ... !!€ 199.99€ 129.99 3.9
I-GIS kunye nenqanaba le-QGIS 2: ukuHlela okuPhucukileyo, ukuKhonkxa, umzobo kunye nokuBekaLe khosi iya kwenza ukuba uqhubele phambili ekuHlalisweni kweShakhethi, kwimephu ye-2.5D, kwimephu yeGridi, kwiSystem, kwimo yemephu kunye nomzobo njalo njalo.€ 199.99€ 129.99 4.2
Isiseko se-GIS: Ukusetyenziswa koMhlaba uKhuselo loMhlaba kunye nokuTshintsha ukuKhangela kwiQGISYiba yingcali kwi-QGIS yoHlalutyo lwedatha ye-Geopatial (okt. Ukujonga kude kunye ne-GIS) kwaye ufunde ukusetyenziswa komhlaba kunye nemephu ye-Cover Cover€ 69.99€ 44.99 4.3
Post edlulileyo«Ngaphambilini Eli lizwe AYITHI kuthengiswa
Post Next Izizathu ezilishumi eziphambili zokwenza idatha yendawoOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-2 "zeekhosi zeQGIS eziBalaseleyo ngeSpanish"
Ndiyongeza inkqubo yokuqalisa ye-QGIS yamahhala ephezulu kakhulu.
Ndiyabonga kakhulu Ndiza kuhamba kakuhle.